Google si Chromecast ngwaọrụ bụ pụtara na-eto eto ndị ahịa, ma ọtụtụ Mmepe na isi gụgharia ụlọ ọrụ ugbua jumped na ohere ịbụ akụkụ nke Google si ala na-eri, mfe Mbido gụgharia ngwaọrụ. Nke a kacha ndepụta gụnyere ngwa na dị na iOS ngwa ahịa, Google Play ahịa, Windows Phone Store, na ozugbo site na chrome nchọgharị. Ngwa ọdịnala na-ota site na udi na media ha ịhụ na-anapụta.
Nkebi nke 1: TV & Movies
Nkebi nke 2: Pictures & Videos
Nkebi nke 3: Games
Nkebi nke 4: Utility
Red ehi TV
Nkowasi: Netflix bụ n'ụzọ dị ukwuu na-ewu ewu nkiri gụgharia ọrụ na dochie nkiri-ebiri na-adịbeghị anya. N'ihi na ihe na-erughị $ 10 ị ga-esi ohere ọtụtụ narị puku ndị TV ngosipụta, fim na ndị ọzọ na media. Netflix bụ ihe bara oké uru na-ejere ọtụtụ ndị, na egbuke gburugburu ọdịnaya gị TV site Chromecast bụ kensinammuo na mfe site na nkedo atụmatụ.
Ahịa: Malite na $7.99 kwa ọnwa
Nkowasi: HBO aga-enye gị nweta ọkacha mmasị gị HBO na TV n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla. N'ihi na ndị anyị na-achọ oké USB media ke laa, HBO Go bụ nnukwu nzọụkwụ na-etinye onwe gị na akara nke mgbasa ozi na ị chọrọ. Chromecast-ewe elu àgwà ọdịnaya nyere na-egosiputa ya na gị na TV na oge na-ahapụ gị anọgide na-ekiri na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba mgbe ị na-ahapụ ụlọ.
Ahịa: Malite na $ 15 kwa ọnwa (na a USB na ndenye aha)
Nkowasi: The adịchaghị ndenye aha maka Hulu TV ọrụ. Hulu Plus-eweta nke a oge nke TV na-egosi online n'oge na-adịghị mgbe ha ikuku, ekwe ka ị na-ekiri ndị ọhụrụ TV na-egosi na gị na oge. Incorporating ọrụ dị ka nke a n'ime gị media collection pụrụ inyere gị aka dochie gị USB ọrụ na ihe na-ina ọrụ, na-eme Hulu si "ụbọchị mgbe ha ikuku" collection na tiivi ka Hulu bara oké uru.
Ahịa: $7.99 kwa ọnwa
Nkowasi: Nke a bụ Google dị nnọọ onwe ahịa ebe maka fim na TV na-egosi, ndọtị nke play ụlọ ahịa na akụkụ nke nnọọ lifeblood nke Chromecast ngwaọrụ. Ị na-achụ nhọrọ ịzụta ma ọ bụ gbazite si a nhọrọ nke fim na TV na-egosi dị kpọmkwem maka nkwanye gị Chromecast ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ akwado site na play ụlọ ahịa.
Ahịa: Ihe na-ọnụ n'otu n'otu, free nkwado ihe kwa ọnwa
Nkowasi: Ọ bụrụ na ị maara na Red ehi ika, na ị na-eleghị anya maara na ụlọ ọrụ haziri nzukọ ụdị nile nke ihe na ntụrụndụ dị ka music, TV, egwuregwu na ndị ọzọ na ndụ ihe. The Red ehi TV na ngwa na website enye a dị mfe ebe na-ekiri ihe niile Red ehi-emeghe ka ọ na-eme ndụ.
Nkowasi: MLB.TV-enye gị ohere na-ekiri ọ bụla nke ahịa isi Njikọ baseball egwuregwu na gị okwu. Ị nwere ike ịhọrọ akụ na a ndụ egwuregwu ma ọ bụ na-ekiri a egwuregwu na ina na HD. Ọzọkwa apụta juputara Archives nke ndụ egwuregwu na redio na ọtụtụ ụzọ na-na-na ọkacha mmasị gị ìgwè.
Ahịa: $ 19.99 kwa ọnwa (ọkọlọtọ) / $ 24.99 kwa ọnwa (adịchaghị)
Nkowasi: Crackle awade mbụ Hollywood fim na TV na-egosi maka free na-enweghị ndebanye aha na ọ dịghị nkwa mgbe achọrọ. Beyond atụmatụ ogologo fim na dum TV ngosipụta, ọrụ nakwa awade n'azụ Mpaghara ọdịnaya nke ọhụrụ na-abịa na fim. Crackle na-ekesịpde site Sony otú kasị nke ọdịnaya ha na-enye bụ Sony ma ha na-mgbe na-agbakwunye ọhụrụ na-abịa taịl nile na-egosi.
Ahịa: Free (Ad na-akwado)
Nkowasi: Nke a na ọrụ dabara n'ime a omenala niche pụrụ iche na ndepụta nke Chromecast ngwa ọdịnala dị. Mere iji napụta Korean ọdịnaya, ọtụtụ ndị nwere ike ịghọta na media ha na-enye. Ha nwere ọdịnaya onwere ọtụtụ Genres gụnyere Korean nkiri, Japanese Anime & fim, telenovelas na music videos na nwere ndepụta okwu na karịrị 160 asụsụ.
Ahịa: Free (Ad akwado), Premium ($ 3.99 kwa ọnwa)
Nkowasi: Ebe ọ bụ na Chromecast e ulo oru na United Kingdom, telivishọn netwọk BBC mepụtara na wepụtara ihe ngwa iji strimụ ọdịnaya na e ohuru ozugbo na ị TV. Gị mbadamba nkume ma ọ smartphone-eme dị ka a na n'ime ime obodo ịnapụta ọdịnaya awa site BBC nke bụ n'otu ntabi zitere na na na TV.
Nkowasi: VEVO bụ a n'ụzọ dị ukwuu ghọtara music video nchekwa data ebe ọtụtụ artists aga na-anakọta ma biputere ha music videos. VEVO nwere elu àgwà videos dị ka enuba na mgbe posts nanị ọdịnaya na performances.Every recognizable artists nwere onwe ha ọwa na saịtị ahụ na na YouTube, nke a na-anya ike na VEVO na-egosipụta mmetụta nke ọ bụla video dị ka kpamkpam dị ka omume.
Ahịa: Free (Ad akwado)
Nkowasi: The ụwa kasị irutụrụ na ọtụtụ ebe ghọtara ọdịnaya nkekọrịta n'elu ikpo okwu, YouTube awade a ebe ndị mmadụ ike, jikọọ, agwa ma na-amụta site n'iji ọrụ kere vidiyo na-nanị ejedebeghị site creativity na onye ọrụ nkwekọrịta.
Nkowasi: RealPlayer aghọwo RealPlayer Ígwé ojii na-adịbeghị anya ọnwa, na-agbakwunye ígwé ojii nkwado ọrụ iji hazie gị videos bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu. The technology n'azụ ọrụ a pụtara n'ihi na ị na-enwe ike ele ụdị ọ bụla nke video ọ bụla na ngwaọrụ na a format na ngwaọrụ gị na-akwado. Nke a sụgharịta mara mma ka Chromecast, ekwe ka ị na-ekiri ihe fọrọ nke nta ọ bụla video na gị TV.
Ahịa: Free (2GB), Premium (malite na $ 5 kwa ọnwa maka 25GB)
Nkowasi: Google bụ ohuru free ngwa mere na-photos site na Android, iPhone, iPad, ma ọ bụ Chrome nchọgharị na edit na-egosipụta na ha na gị na nnukwu ihuenyo.
Nkowasi: Plex bụ ọrụ wuru iji hazie niile nke gị onye mgbasa ozi. Plex uploads niile nke gị mgbasa ozi faịlụ na akaụntụ gị mere na ị nwere ike ịnweta ha ọ bụla na dakọtara ngwaọrụ. Ọ dị mfe ntọlite ​​na mfe enwe gị ọdịnaya na gị TV site Chromecast.
Nkowasi: Wuru ịnapụta ọdịnaya site The Washington Post, a na ngwa na-anapụta ozi ọma ukwuu n'ime ke ọkara nke video. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji nweta gị ozi ọma na-immersive ụzọ ziri ezi na ntụsara nke gị n'ihe ndina na Chromecast ngwaọrụ. Ọdịnaya na-anakọtara site na ọtụtụ isi mmalite na-curated site Washington Post ma hazie n'ụzọ na-bụ ma saa mbara ma mkpa ka na-asụ ngọngọ gafee.
Naughts & obe
Nkowasi: ejikọ otutu ngwaọrụ gị TV site na Chromecast na ngwaọrụ ma na-eme ka TV na-akpa àgwà dị ka otu nnukwu ịbịaru na mpe mpe akwa, ikwe multiple ọrụ ise na ihuenyo ozugbo site na ha ngwaọrụ.
Ahịa: Free, Premium
Naughts na obe
Nkowasi: Enye ohere abụọ Player iji ha igwe ma ọ bụ mbadamba jikọọ Chromecast ozugbo na-egwu egwuregwu nke TicTacToe. Ma Player gaba ruo mgbe otu onye n'ime ha nwere otu egwuregwu. Mgbe ọ bụla aga na-synced ka onye ọ bụla ngwaọrụ, chromecast-eme dị ka a ndụ echiche na a nnye na nnukwu ihuenyo.
Nkowasi: Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na-achọta ngwa ọdịnala n'ihi ọhụrụ gị Chromecast na ngwaọrụ ma na ị nwere gam akporo ngwaọrụ, a na-enye aka ngwa navigates ị na ntụziaka nke ọzọ ngwa mepụtara-arụ ọrụ na Chromecast.
Nkowasi: AllCast bụ a ehiwe n'ihi na ị na-enuba gị ọdịnaya ka a nhọrọ nke ngwaọrụ, gụnyere Google Chromecast ngwaọrụ. E nwere free version na ekwe ka ị na-a 1 nkeji ikiri nke ọdịnaya ọ bụla, n'ihi ya, ị ga-azụta adịchaghị ngwa na n'ụzọ zuru ezu enwe gị ọdịnaya.
Ahịa: Free, Premium ($ 4.99)
Nkowasi: Nke a ngwa e mere ichupu a obibi ọhụrụ na ihuenyo na-eji dochie Chromecast si ndabere n'ụlọ ihuenyo. Mmepe doro anya igosi na ị na-apụghị dochie Ihuenyo ma, otú a ngwa kama na-arụ ọrụ site na ịkwanye a chepụtara echepụta n'ụlọ ihuenyo gị TV. Ogo customization agụnye wijetị maka ozi ọma, elekere, okporo ụzọ, ihu igwe na ndị ọzọ. Mba ndị ọzọ na ngwa e mere dochie gị n'ụlọ ihuenyo na a n'ụzọ na-kensinammuo na dị ka bara uru dị ka nke a.
Nkowasi: Gallery Nkedo specializes na nkwanye ọdịnaya gaa na TV ejikọrọ ngwaọrụ, n'ihi ya, ọ bụ nanị eke na nkwado kwesịrị ịgụnye Google si gụgharia ngwaọrụ dị ka mma. Nkọwa na-ekwu na gụgharia ike na-ejedebeghị nanị ihe ngwaọrụ gị nwere ike na-akwado, otú i nwere ike enuba fọrọ nke nta ihe ọ bụla site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Nke a na ọrụ na-akwado faịlụ na na-na ekwentị gị nke dị mma maka na-ekere òkè videos weere na ekwentị gị.
Ahịa: Free, Premium ($ 2.99)
Nkowasi: Nke a Podcast njikwa ngwa enye gị ohere mfe anọ ruo ụbọchị niile nke ọkacha mmasị gị ọdịyo na video pọdkastị. Integration na ndenye aha saịtị mbubata niile nke gị ọdịnaya na ndebanye aha na ngwa, na-eburu ihe niile dị mmekọrịta n'etiti ọrụ. Gụgharia ka Chromecast na-eme ka gị na-anọkọ mmasị ozi ọma ojii na nnukwu ihuenyo nnọọ mfe.
Nkowasi: Nke a bụ music ngalaba nke Google Play Store, àjà ọtụtụ nde songs tinye gị na Google Music n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-denye aha na Google Music All Access, ị ga-enweta ohere dum Google Music Library, nakwa dị ka gị onwe music collection ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ bulite ya.
Ahịa: Ihe na-ọnụ n'otu n'otu, ma ọ bụ $9.99 kwa ọnwa maka All Access
Nkowasi: Pandora awade free, ahaziri redio ka ọrụ na ikike iji-ewe ihe achịkwa gị music site na ha na-akwụ ụgwọ ọrụ. Chromecast-arụ site na gị TV, nke na-enye gị ohere na-egwu ọkacha mmasị gị music site kasị gụnyekwara ọkà okwu n'ụlọ gị.
Ahịa: Free na adịchaghị ($ 3.99 kwa ọnwa)
Nkowasi: Songza e mere na-ewu a playlist dabeere gburugburu gị na ọnọdụ na egwú mmasị. Gịnị na-esetịpụrụ ọrụ a iche bụ playlist nhọrọ na ha wuru, categorizing listi ọkpụkpọ n'ime eme, Genres, ọnọdụ uche, na ọtụtụ iri afọ. Ọ dị mfe itu ọnụ a playlist na sekọnd na ị pụrụ ige ntị ruo ọtụtụ awa.
Ahịa: Free (Ad na-akwado) adịchaghị ($ 0.99 kwa izu)
Nkowasi: Rdio a raara nye ejikọta ndị mmadụ ha mmasị omenkà, songs, listi ọkpụkpọ na ndị enyi. Na ihe karịrị nde 20 songs ọ dị mfe ịhụ ochie, maara music na ihe ọhụrụ na-akpali akpali ẹsịn ke mix. Facebook mwekota-eme ka ọ dị mfe jikọọ enyi na ha music.
Ahịa: Free na adịchaghị ($ 4.99 kwa ọnwa)
> Resource> égwu> A Comprehensive na ọtụtụ ndepụta nke égwu mere maka Google si Chromecast